Senator Australian ah "Maanta hadii muslimiin la xaquusay run ahaantii inta badan iyadagaa dadka laaya" ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Senator Australian ah “Maanta hadii muslimiin la xaquusay run ahaantii inta badan...
Senator Australian ah “Maanta hadii muslimiin la xaquusay run ahaantii inta badan iyadagaa dadka laaya”
War saxaafadeed kasoo baxay xafiiska mid ka mid ah xildhibaanada baarlamanka Austraia lagana soo doorto gobalka Queensland.
Xildhibaankan ka tirsan Baarlamanka Autralia oo ka hadlayay Falkii lagu xasuuqay Muslimiinta Salaada khudbada Jimcaha ku dukanay labada masaajid ee kuyaalla dalka Newzealand, Iyadoona halkaasi lagu xasuuqay muslimiin gaaraya 49 ruux halka, sidoo kalane isbitaalada la dhigay in ka badan 20 ruux oo kale.
Falkaan argaxiso markuu dhacay ayaanan inta badan looga hadal sida marka dhacaan falal argagixiso oo noocaan oo kala ah kasoo haddii hal qof uu ku geyriyoodo ay dunida dhami cambaareyso.
Iyadoo ay jirto ka aamusnaanta arinkaas ayay qaar kamid ah Dadka aadka u neceb Muslimiinta u dulqaadanwaayeen cambaareynta ka imaaneyso dadka leh damiirka bini aadanimo, ayuu xildhibaankan soo saaray war saxaafadeed waran ku gilgil ah.
Hadaba halkaan hoose ka aqriso war saxaafadeedka.
“Anigoo ka hadlaya rasaaseynti ka dhacday labada masaajid waxaan kasoo horjeedaa falaka rabshadaha”.
si kastaba ha ahaatee falalka ceeykan oo kale ah waxaa sababikara cabsi laga qabo soo badashada dadka muslimiinta ah ku soo badanayaan wadamada Australia iyo Newzealand”.
Caadiyan siyaasiyiinta garabka bixidix waxay ku andacoodaan in rabsashadahaan ay laxiriiraan hubka sharcidarda iyo cunsuriyiinta taasine waxaan dhihi karaa waa been”.
Maanta sabaabta keentay in uu dhiigu ku daato wadooyinka Newzealand waxaan dhihi karaa waa nidaamka ugu fududeynaa in qaxootigu si fudud ugu soo galaan Newzealand”.
Runta haddii lasheego maanta haddii xooga muslimiin ah dhibaato soo gaartay inta badan iyagaa dadka laaya”.
Xildhibaankan hadalkiisa intaa kumuusan dhimin ee wuxuu weeraray diinta Islaamka kuna sheegay in aysan lamid ahayn diimaha kale isagoona sheegay dadka haystaa in ay yihiin danbiiyaal xittaa haddii aysan dad dilin.
Ugu danbeyn wuxuu soo daliishaday Baybalka aayad taasoo macneedu yahay xalku waa seef.
Previous articleNinkii maanta weeraray Masjidka iyo rag kale oo gacanta lagu dhigay +Sawirro
Next articleMadaxweynaha Jabuuti Mr: Geele oo goordhaw soogaaray Magaalada Muqdisho.